Qaramada midoobey oo war kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. – Soomaali 24 Media Network
Qaramada midoobey oo war kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Posted on April 1, 2021 Leave a Comment on Qaramada midoobey oo war kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo shir ka yeeshay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa mar kale ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaaliya in ay isugu yimaadaan shir ay uga wada xaajoonayaan khilaafka doorashada ka taagan.
War saxaafadeed kasoo baxay golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in golaha warbixin ku saabsan khilaafka doorashada ka taagan ka dhageesteen ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Amb, James Swan.
Amb James Swan ayaa Golaha amaanka u sheegay in ay muhiim tahay in doorasho loo dhanyahay ka dhacdo Soomaaliya sida ugu dhakhsaha badan, waxa uuna tilmaamay in doorasho ka dhacda Soomaaliya ay dan ugu jirto dhamaan Soomaalida.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada Soomaalida in ay xaliyaan khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya iyada oo lagu saleenayo heshiiskii horey u gaareen Madaxda DF iyo kuwa dowlad goboleedyada 17-kii Sebtember 2020.
Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa wali ka taagan khilaaf ay ku guul dareesteen in ay xaliyaan hogaamiyaasha Soomaalida, waxaana marar badan guul dareestay dadaalo beesha caalamka ku dooneysay in heshiis looga gaaro khilaaflka doorashada ka taagan.
← Markab ku caariyey dekedda Boosaaso.
Saacad Qaali ah oo suuqa xaraashka la geeyey, kadibna cid iibsata la waayey. →